सेयर बजारको कन्त विजोग ! निराश हुँदै सेयर लगानीकर्ताहरु – Banking Khabar
सेयर बजारको कन्त विजोग ! निराश हुँदै सेयर लगानीकर्ताहरु
बैंकिङ खबर । सेयर बजार निरन्तर ओरालो गतिमा लागेपछि लगानीकर्ता निराश बन्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुले सेयर बजारको ओरालो गति तत्काल नरोकिने बताएपछि लगानीकर्ता मारमा परेका छन् ।
नेपालमा अधिकांले बैंक वा सहकारीबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । भाउ बढेपछि बेचौँला भनेर सोचेका लगानीकर्ता सेयर बजारको ओरालो गतिका कारण लगानी नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विगत केही वर्षयता, सेयर लगानीकर्ताले थुप्रै सम्पत्ति गुमाएका छन् । तीन वर्षयता मात्रै १५ लाख ६० हजार सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्ति पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । १२ साउन २०७३ मा नेपाली सेयर बजारको आकार २० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको थियो जुन मंगलबार बजार बन्द हुँदासम्म १५ खर्ब २१ अर्बमा झरेको छ ।
सम्पत्ति खुम्चिँदै गएपछि बजारमा पैसा अभाव हुन थालेको छ । लगानीकर्ताहरुसँग लगानी गर्ने पैसा नभएको अवस्था छ । सेयरको मूल्य बढ्दा पुँजीगत लाभ लिएर जीवनस्तर उकासेका लगानीकर्ता पनि अहिले सेयको मूल्य ओरालो मात्रै लागिरहँदा संकटमा परेका छन् । ब्लु चिप भनिएका सेयरको मूल्य पनि निरन्तर घटिरहेको छ । सामान्यतया ६–८ वर्षको चक्रमा घटबढ हुने गरेको नेपाली सेयर बजारमा एक दशकयता दोस्रोपटक बियरिस देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८८१ अंकको कीर्तिमानी स्तरबाट ओरालो लागेर अहिले ११९७.७५ अंकमा छ । यसबीच गत फागुनमा ११०० अंकमा नेप्सेले यो सिजनको न्यूनतम विन्दु तय गरेको थियो । न्युनतम विन्दुमा पुगेर पुनः फर्केको बजारले १२०० को विन्दु नाघेपछि लगानी थपिन थालेको थियो । तर, फेरि बजार ओर्लिन थालेपछि कतिपयले लगानी झिक्न थालेका छन् ।
बढ्दो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाका साथै पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको अभाव भइरहेको छ । जेठ मसान्तसम्म नेपालबाट ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको र रेमिट्यान्स, निर्यातबाट आएको कमाइ, पर्यटन क्षेत्रको आय, ऋण र अनुदानलगायत विभिन्न स्रोतमार्फत विदेशबाट नेपाल भित्रिएको पैसाले नपुगेपछि झन्डै ९१ अर्ब थप पैसा नेपालले विदेशमा तिर्नुुपरेको छ । स्वदेशी पुँजी पलायनका कारण बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भई सेयर बजार प्रभावित भएको छ । पछिल्लो कानुनी सुधारका कारण पनि सेयर बजार प्रभावित बन्न पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको देखिन्छ ।